Mitemo Yebasa uye Mamiriro
Mitemo uye Zvigaro zvezvinhu zvinotengeswa panzvimbo yepaiti https://egay.shop.
Chisungo 1 - Chinangwa
Aya mazwi nemamiriro ezvinhu anotonga kutengesa neEgay Shop pa https://egay.shop.
Iyi webhusaiti inoshanda neEgay Shop. Munharaunda yese, mazwi "isu", "isu" uye "vedu" anoreva Egay Shop. Egay Shop inopa iyi webhusaiti, kusanganisira zvose zveruzivo, zvishandiso nemashandi anowanikwa kubva kune ino yepaiti kune iwe, mushandisi, akagadziriswa pamagamuchirwa ako ose mazwi, mitemo, mazano uye zvizivo zvakataurwa pano.
Chinyorwa 2 - Mitemo yepaIndaneti yeShamba
Kuputsa kana kukanganisa kweimwe yemitemo ichaguma nekuguma kweMabasa ako
Chisungo 3 - Zvose Zviitiko
Chinyorwa 4 - Kururamisira, Kuzadza uye Kubata Nguva
Chisungo 5 - Mitengo
Mitengo yemigetsi yedu inoratidzwa muma Euros yose mitero inosanganisira (VAT nemimwe mitero inoshandiswa musi wekuraira), kunze kwekunge zvataurwa zvichiratidzwa uye kusabhadhara kushandiswa uye kutengesa mari. Kana zvichida kune imwe nyika kunze kweguta guru reFrance iwe ndiwe muteri wechigadzirwa chinotarisirwa. Mitemo yemitambo kana imwe mitero yemunharaunda kana mitero yekutumira kana mitero yehurumende inogona kubhadharwa. Iko kodzero uye zvikwereti hazvisi basa re Egay Shop. Vachange vari pamari yako uye ndeyemhosva yako, zvose maererano nemashoko ekuzivisa uye kubhadhara kune masimba ane kodzero uye miviri yenyika yako. Tinokukurudzira kuti ubvunze pamusoro pezvinhu izvi nehutongi hwako. Yese mirairo zvisinei nokuti yakabva kupi inobhadhara muEuros. Egay Shop ane kodzero yekugadzirisa zvigaro zvaro panguva ipi zvayo, asi chigadzirwa chichabhadharwa maererano nesarudzo inoshandiswa panguva yekugadziriswa kwehurongwa uye zvichienderana nekuwanikwa. Izvo zvigadzirwa zvinoramba zviri nzvimbo yevanhu venyika Egay Shop kusvikira pabhadharo yakakwana yemutengo. Inyevero: pakarepo iwe paunenge uchitora zvigadzirwa zvakarayirwa, pangozi yekurasikirwa kana kukanganisa kwezvinhu zvinotengeswa kwauri.
Chinyorwa 6 - Kuchinjwa kuBasa neMitengo
Chisungo 7 - Products kana Services
Ruzivo rwechibvumirano runowanikwa muchiChirungu uye ruchasimbiswa munguva ichangopfuura panguva yekugadziriswa kwemurairo wako. Egay Shop anochengetedza kodzero yekuregeresa kubhadhara, uye kwete kutsigira chirongwa chechikonzero chero chipi zvacho, kunyanya kana pane dambudziko rekupa, kana kuti kana kuoma kuburikidza nemutemo wakagamuchirwa.
Chinyorwa 9 - Kugadziriswa kwemurairo wako
Chero hupi urongwa hunoonekwa pawebsite https://egay.shop inotora kusungirirwa kumagariro nemagariro anhasi. Chero humwe husimbiso hwehutano hunoreva kushandira kwako kwakakwana uye kwakakwana kune mamiriro ezvinhu akadai ekutengeswa, pasina kana kusachengetwa. Zvose zvakapiwa uye zvakasimbiswa zvakanyorwa zvichabva zvakakodzera uchapupu hwekutengeserana. Iwe unotaura kuti une zivo yakakwana. Kutsigirwa kwehurongwa kuchafanirwa kusayina nekugamuchirwa kwemabasa akaitwa. Chidimbu chemashoko ehurumende yako ichakutumirwa iwe kuburikidza nekero ye-e-mail yekusimbisa kwehutori hwako.
Ichokwadi chekusimbisa dare rako rinoreva iwe iwe unofanirwa kubhadhara mutengo wakatarwa. Kubhadhara kwekutenga kwako kunogadzirwa nekadhi rechikwereti ne SSL yakavharidzirwa yakachengeteka protocol.
Chinyorwa 11 - Kubhadharwa, kudzoka & kugoverana
Mutemo wedu unotora mazuva 30. Kana mazuva e30 apfuura kubva pakutenga kwako, zvinosuruvarisa kuti hatigone kukupa kudzorera kana kutengesa.
Zvimwe zveutano uye zvekutarisira zvinhu
Kune dzimwe mamiriro ezvinhu apo kungodzokorora zvishoma kunopiwa:
Chero chinhu chisiri mumamiriro ake epakutanga, chakavhiringidzika kana kuti chinoshaya chikamu nokuda kwezvikonzero kwete nekuda kwekanganiso yedu
Chero chinhu chipi zvacho chinodzorerwa kwemazuva 30 mushure mokuberekwa
Kudzorera kwekupedzisira kana kusipo:
Kana iwe waita izvi zvose uye iwe uchigere kugamuchira mari yako yekuripira, tapota taura nesu nokunyanya HERE.
Kutengesa zvinhu zvekubhadhara zvinobva pamutengo wekutengesa.
Isu tinongotora zvimwe zvinhu kana zvisina kukwana kana kukuvara. Kana uchida kuitsinhanisa nechomwe chinhu, titumire email pa hello@egay.shop.
Chisungo 12 - Kuwanikwa
Zvigadzirwa zvedu zvinopiwa chero bedzi zvavari kuoneka pawebsite yepaiti https://egay.shop uye mukati memiganhu yezvikwata zviripo. Nokuda kwezvinhu zvisingatengeswi, zvipo zvedu zvinoshanda zvichienderana nekuwanikwa kune vatengesi vedu. Kana musingaoneki kwechigadzirwa mushure mokuisa mutemo wenyu, tichakuzivisai ne email. Urongwa hwako huchabviswa kamwe chete uye hapana bhengi rebhange richaitwa.
Chisungo 13 - Kutumira
Zvigadzirwa izvi zvinowanikwa kubhuku rekutakura rinoratidzwa panguva yekugadzirisa chirongwa, munguva yakaratidzwa pane peji rekusimbisa peji. Kana pane kuchetedza kutumirwa, email inotumirwa kukuzivisa iwe zvinogona kuitika panguva yekutora yakaratidzwa kwauri. Muchiitiko chekutengeswa nemutakuri, Egay Shop haagoni kutongerwa mhosva yekuuya kwekupedzisira kubva pamusana pokushayikwa kwevatengi mushure mokunge mazano akawanda ekugadza. Munyaya yekubudiswa kunze kweEuropean Union, mimwe mitero inogona kushandiswa nemitemo pavanopinda munyika yeaigamuchira kuburitswa. Iyi mitero iine mutoro wemunhu anotora urongwa.
Chinyorwa 14 - Kururamisa kwekubhadhara uye Nhoroondo yeApt
Chisungo 15 - Zvimwe Zvishandiso
Isu tinogonawo, mune ramangwana, kupa mitsva mizhinji uye / kana zvikamu kuburikidza newebsite (kusanganisira, kusunungurwa kwezvishandiso zvitsva nemidziyo).
Zvinhu zvitsva zvakadaro uye / kana maitiro zvichave zvakare pasi peMitemo yeBasa.
Chinyorwa 16 - Third Party Party Links
Isu hatisi mhaka kune chero kukuvadza kana kukuvadza kwakabatana nekutenga kana kushandiswa kwezvinhu, zvigadzirwa, zvigadzirwa, zvigadzirwa, kana zvimwe zviitiko zvakatorwa zvine chokuita newebsite yechitatu. Ndapota nyororai zvakanyatsoongorora mitemo nemagariro evanhu vatatu uye edzai kuti munonzwisisa musati maita chero mutengesi.
Zvipomero, zvinodaro, zvinonetsa, kana mibvunzo pamusoro pezvinhu zvechitatu-party zvinofanira kutaurirwa kune wechitatu.
Chinyorwa 17 - User Comments, Feedback uye Zvimwe Zvinyorwa
Unobvumirana kuti mazwi ako haazoputsi chero kodzero ipi zvayo yevamwe vatatu, kusanganisira copyright, trademark, mararamiro, unhu kana imwe kodzero yemunhu kana yekodzero. Iwe unobvumirana zvakare kuti mazwi ako haazove ane nhema kana zvimwe zvisiri pamutemo, zvinyoronyoro kana zvinonyadzisa, kana ane chero kombiyuta yekombiyuta kana imwe mwareji ayo anogona nenzira ipi zvayo kuchinja kushanda kweBasa kana chero webhusaiti yakabatana. Iwe haungashandisi kero yehetera ye-e-mail, unozvifananidza kuva mumwe munhu kunze kwewe iwe, kana kuti kutinyengedza isu kana mapato mapato maererano nekwakabva chero zvataurwa. Iwe unongotarisana chete nemashoko ose aunoita uye kunyora kwawo.
Hatitori mutoro uye hatifungi nezvemhosva yezvinyorwa zvese zvakatumirwa newe kana ani zvake wechitatu.
Chinyorwa 18 - Mashoko Evanhu
Chisungo 19 - Zvikanganiso, Inaccuracies uye Kusiya
Isu hatina basa rekugadzirisa, kuchinja kana kujekesa ruzivo muSebhisi kana pane chero webhusaiti yakabatana, kusanganisira pasina mirefu, ruzivo rwemari, kunze kwekudiwa nemutemo.
Hapana chinyorwa chakatsanangurwa kana zuva rekuvandudza rinoshandiswa muHurumende kana pane chero webhusaiti yakabatana, inofanira kutorwa kunoratidza kuti zveruzivo rose muSebhisi kana pane imwe nzvimbo yehuwandu yakabatana yakashandurwa kana kuvandudzwa.
Chisungo 20 - Zvishandiso Zvirambidzwa
Chisungo 21 - Kudzivisa kweZvimbiso; Kurambidzwa kweMhosva
Muzviitiko zvisingayti Egay Shop, vatungamiri vedu, mapurisa, vashandi, vanobatana, vashandi, makambani, vashandi, vatengesi, vatsigiri vevashandi kana varairidzi vemhosva vanogona kutongerwa chero kukuvadzwa, kurasikirwa, kudai, kana chero zvakananga, zvisina kujeka, kana zvinokonzera kukanganisa kwemhando ipi zvayo, kusanganisira, pasina kukanganisa kurasikirwa nehupfumi, kurasikirwa mari, kurasikirwa mari, kurasikirwa kwedhadha, kushandiswa kwemari, kana zvimwe zvinokanganisa zvakafanana, zvingave zvakagadzirwa musangano, kutadza (kusanganisira kusaregerera), mutoro wakasimba kana zvimwe, zvichibva kushandiswa kwako chero ipi zvayo yebasa kana zvimwe zvigadzirwa zvinoshandiswa uchishandisa basa racho, kana kune chero ipi zvayo inoshuwaridzana inobatanidza nenzira chero ipi zvayo yekushandisa kwako sebasa kana chero chero chibereko, kusanganisira, asi kwete kune, chero zvikanganiso kana kuregererwa mune zvimwe zvinhu, kana chero kurasikirwa kana kukanganisa kwemhando chero ipi zvayo yakabatwa semugumisiro wokushandiswa kwebasa kana chero zvakagadziriswa (kana chigadzirwa) chakatumirwa, chinoparadzirwa, kana kuti chakaitwa zvimwe zviripo kuburikidza nebasa racho, kunyange kana vakurudzirwa kuti vanogona.
Nemhaka yokuti vamwe vanoti kana masimba haabvumi kuregererwa kana kuregererwa kwemhosva kune zvakakosha kana kuti zvinokanganisa, mumatunhu akadaro kana masimba, mutoro wedu uchasvika pamwero mukuru wakabvumirwa nemutemo.
Chinyorwa 22 - Kuremekedza
Unobvumirana kubatsiridza, kuchengetedza nekubata zvisina kunaka Egay Shop uye mubereki wedu, zvikamu, masangano, vashandi, vatungamiri, vatungamiri, vashandi, makambanikiti, vashandi vekambani, vatsigiri vebasa, vashandi vekutengesa, vatengesi, vashandi nevashandi, vasingabatsiri kubva kune chero chikonzero kana kuda, kusanganisira mitemo inonzwisisika yevashandi, yakagadzirwa nemumwe munhu wechitatu-wega nekuda kwekubuda kana kupesana kwako kweMitemo yeBasa kana zvinyorwa zvavanowedzera nekutaridzirwa, kana kuputsa kwako mutemo chero upi zvawo kana kodzero dzemunhu wechitatu.
Chisungo 23 - Kusagadzikana
Chisungo 24- Kugumisa
Chisungo 25 - Chibvumirano Chese
Chero zvakawanda zviri kududzirwa Terms ava Service haringayswi zvaizoita pamusoro kunyora urongwa hwezvinofanira kuitwa bato.
Chisungo 26 - Mhosva
Izvo zvinogadzirwa zvinowirirana nemutemo weFrench uri kushanda. Mutoro weEgay Shop haugoni kubatanidzwa kana musingateereri mutemo wenyika iyo chibereko chacho chinopiwa. Ndiro mutoro wako kutarisa nehurumende dzenharaunda mikana yekuisa kana kushandisa zvishandiso kana mabasa anunoda kuronga. Pamusoro pe, Egay Shop haigoni kutongerwa mhosva yekukonzerwa nekushandiswa zvisina kunaka kwechitengo chakatengwa. Pakupedzisira mutoro we Egay Shop haikwanisi kutongerwa mhosva chero ipi zvayo yekukanganisa kana kukuvadza kunowanikwa kushandiswa kweInternet, kusanganisira kuputsika mubasa, kunze kwekunyorwa kana kuvapo kwemavhidhiyo emakombiyuta.
Chinyorwa 27 - Mutemo unobvumirwa kana pane nharo
Iyi Mitemo Yebasa uye chero zvibvumirano zvakasiyana zvatinokupa iwe Nheyo zvichakutungamirirwa nekugadzwa maererano nemitemo yeFrance.
Mutauro wechibvumirano ichi ndiChirungu. Iyi mitemo yekutengesa inoteerera mutemo weFrance. Kana pane kukakavadzana, matare eFrance achave ega akakodzera.
Chinyorwa 28 - Intellectual property
Zvose zvikamu zvesaiti https://egay.shop zviripo uye zvinoramba zvakagadziriswa uye zvisikwa zvega Egay Shop kana vatatu vanobvumirana Egay Shop kuvashandisa. Hapana munhu ane kodzero yokubereka, kushandisa, kubhadhara, kana kushandisa chero chinangwa chero chipi zvacho, kunyange zvishoma, zvikamu zvesayiti iyo software, inooneka kana yakanaka. Chero chipi nechipi chakareruka kana kuti hypertext chibatanidzwa chinorambidzwa zvachose pasina chibvumirano chakanyorwa chinyorwa che Egay Shop . Zvimwe zvikonzero zvezvibereko zvinoratidzirwa sezvizvi mukurondedzerwa kwavo ndezvakagadziriswa uye nzvimbo yega yega Egay Shop. Chero ani zvake wepanyama kana munhu wemutemo anonyora zvose kana chikamu chezvigadzirwa izvi anokonzerwa nekupomerwa.
Chinyorwa 29 - Shanduka kune Magwaro Ebasa
Chinyorwa 30 - Contact Information
Mibvunzo pamusoro pemitemo yebasa inofanira kutumirwa kwatiri nokunyanya HERE.